China Interpupillary kure mita mitaWB-1103D Kugadzira uye Fekitori | SDK
Iyo inopindirana mita yekumira chinhu chekuyera chinoshandiswa kuyera chinhambwe pakati pevadzidzi veziso revanhu mukuita kwekubvisa uye kukodzera.
Iyo yekuyera musimboti wekupindirana kwemamita mita ndeiyi: iyo optotype yakavhenekerwa nechiedza sosi inoratidzwa pane imwe nhanho yekushanda pamberi pemaziso emurwere neiyo optical system. Kana murwere akatarisa iyo optotype, inoonekwa axis yemeso ekuruboshwe uye kurudyi maziso anopindirana pane ino chaiyo nzvimbo yekushanda. Kure. Panguva ino, mwenje unoumba poindi yekuratidzira pamusoro penzvimbo yemurwere yekuruboshwe uye kurudyi corneas. Nyanzvi yemaziso inokwanisa kuona bvudzi rekuverenga uye aya mairi maviri ekuratidzira panguva imwe chete kuburikidza neyemaziso. Mushure mekufambisa kuruboshwe uye kurudyi kuverenga bvudzi rebvudzi kunzvimbo dzekuratidzira dzemurwere ziso rerudyi uye rerudyi, chinhambwe chemurwere chinopindirana chinogona kuwanikwa pachiratidziro.
Iyo inopindirana yedaro mita mita yekuongorora chishandiso chinogadzirwa chinogadziriswa chinoshandika chine maviri-mativi ekufambisa mafambiro, uye matatu akaenzana maoko ane mazita ezita akapindirana madaro e55mm, 65mm, 75mm, uye iwo chaiwo epakati madaro eaya matatu akaenzana sleeve Iko kutsauka pakati pekukosha uye dzidziso yepakati kureba kukosha kunofanira kudzorwa mukati me01mm.
Iyo inopindirana yedaro mita mita yekuongorora chishandiso chakashongedzwa nemaviri OD mwero akaenzanisirwa maziso kutevedzera iyo yekuratidzira poindi yemufananidzo wakatarwa unoonekwa kubva kumudzidzi wemurwere munzvimbo inoshanda.
Nekuenzanisa iyo inopenya pupu pamudzidzi nechiyero chechiedza, chiyero chinogona kuitwa mune ese ari maviri uye maviri maziso.
Inoshanda kuyera renji:
Kupindirana kwedaro pakati pemeso 45-82mm
Kuruboshwe uye kurudyi mudzidzi daro:
Inopimika monocular tarisiro kure kuora:
Otomatiki shutdown nguva:
Mira kweinenge miniti
Pashure: Otomatiki refractometer FKR-8900
Zvadaro: Akangwara komputa refractometerFR710